Ukuzalwa komntwana - kungcono injabulo enkulu futhi umthwalo wemfanelo. Futhi okubaluleke kakhulu ekukhuleni kwayo efanele kanye neluhlaka lwentfutfuko - ukudla okufanele. Futhi kusukela ubisi lwebele. Yiqiniso, namuhla kukhona ezihlukahlukene enkulu zokwenziwa compounds, kodwa ngempela eqolo, futhi awukwazi esikhundleni ngokugcwele ubisi lukamama. Ngakho-ke hypogalactia zokuvimbela kufanele kwenziwe kusukela esikhathini yokukhulelwa.
Kungaba uzoboniswa zonke ngezindlela ezahlukene. Ngezansi sikhuluma izinhlobo ezinkulu futhi izici ukubonisa zabo. Nokho, ngokuvamile kuba lingachazwa ngokuthi ukuncipha ndlala mammary. Lokhu ungaboniswa ephula izinqubo of lactation, ephakamisela noma ukwehlisa okuqukethwe amanoni umsoco ubisi, kanye ukunciphisa isikhathi lactation (esingaphansi kwezinyanga eziyisihlanu).
Nakuba thina chaza kafushane kakhulu lokhu ukuphambuka njengoba hypogalactia. Kuyini, uyazi mathupha njalo umama lwesithathu. Nokho, ngaphakathi ihlukaniswe yaba eziningana zenyathi. Ngokuya kanjani kungaba ekuseni khulu, ngemuva kwesikhathi. Kulokhu umuntu bokuqala kuyinto evamile. Kulokhu, akukho ubisi izinsuku 10 emva kokubeletha. Mayelana hypogalactia ngasekupheleni ongathi, uma kube izinsuku ezingaphezu kwezingu-10 kusukela ngosuku ukulethwa.
Izizathu hypogalactia ngeke esimweni ngasinye bebodwa. Ukushiyana kwezidalwa yesibili uhlukanisa isifo ngaleso zamabanga aphansi naphezulu. Primary kwenzeka hhayi ngaphezulu kuka-5% abesifazane abakhulelwe. Lokhu kungenxa kokunikezwa kwe-ukuphazamiseka kwama-hormone. Ezimweni eziningi, kuba nesifo sikashukela, ehlasela umzimba goiter anobuthi. Kulezi zimo, nezindlala mammary musa ukukhiqiza ubisi olwanele.
hypogalactia Secondary iboshelwe indawo yokuqala inqubo engalungile ehleliwe ibele. Isikhathi esining impela ke liwokunamathiselwe ezingavamile noma kamuva ebeleni. Ngaphezu kwalokho, ukuhlukumeza ka lactation lingaphathelaniswa ne prematurity, izifo komama ezithathelwanayo, yezinkinga nenkathi yokukhulelwa nokubeletha, kanye nezingozi zokudla okungafanele.
Futhi siphethe rassmarivat hypogalactia izinhlobo, kanye ngezigaba zokugcina uhlukanisa kube yeqiniso neyamanga. Konke lokhu zilwane basonta Uhlobo lokuqala, futhi kukhona hhayi kaningi. odokotela basesibhedlela kukhona okuningi cishe ukuzwa hypogalactia zamanga. Lokho ubisi olwanele kukhiqizwa, kodwa umama ibonakala ukuthi ingane ayikho.
Nakulokhu futhi mayelana nezizathu
Sesihlole hhayi kuzo zonke izimo lapho owesifazane angase abhekane nenkinga efanayo hypogalactia. Ukuthi kuyini, esikwaziyo kakade, okungenani, umbono kokuqala safike manje udlulela phambili. Lesi sifo kungadalwa ukuthatha imithi ethile, njengengcebo kwama-hormone isisu.
Ngezinye izikhathi odokotela ibhekene ukwenqena abesifazane ukuba bancelise. Ezimweni eziningi, ngeke bathethelele isinqumo sayo ukuhambisa ingane ukuba nenye yokuntuleka ubisi noma ephansi izakhi. Akuyona indlela engcono kakhulu ukudlala futhi ibele kamuva. Namuhla, ngakho-ke, namanje ukulethwa Igumbi ingane ukunikeza umama ukukhiqiza reflex oncelayo. Futhi muva nje, Regulations ethandwa (1 ukusuthisa amahora amathathu) zifakwe ohlwini yezizathu angakhula lokhu ukuphambuka. Ngakho-ke, labo abambalwa amasonto zokuqala ngemva kokuzalwa Kunconywa ukunikeza ingane ebeleni kaningi ngangokunokwenzeka, ngaphandle ngezikhathi ubuthongo.
Ukulala nabancelisayo ukuphumula omama kufanele ukuhlangabezana ngokugcwele izidingo zomzimba wakhe. Kahle kahle, umama kufanele aqiniseke ukulala emini, kanye imvuthu. umthwalo ngokweqile ngokomzimba nangokwengqondo iyehlisa lactation.
Ngempela, njengoba kwenza lo mama yaqaphela ukuthi wayengenalo ukuntula ubisi lwebele? Awunayo ukuqagela uma unake ingane yakho. Uma amandla akwanele, umntwana kuyoba ezingezwakali, ukukhala njalo ngizibuza esifubeni. Ngisho nangemva kokuba eside abancela umzamo ayikhiphe esifubeni sakho uzobe ephelezelwa nokumemeza. I yalokhu kungaba abampofu isisindo somzimba. Ngokuvamile izingane ubenosuku ukwengeza 20-30 g Uma nigcina ukuthi imvuthuluka awufiki lezi zibalo, noma uqale ukuba anciphise umzimba, bese uyibike ngokushesha kudokotela ukuthatha isinyathelo.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa udinga ukuqinisekisa ukuthi ingane yakho unemisebenzi ubisi. Kuze kube yimanje, umama okhulelwe kufanele agweme ukucindezeleka, udle kahle futhi ngesikhathi okufanele alale ngaso. Kusukela trimeter yesibili kudingeka balungiselele webele ukusuthisa ingane, ngaphandle kwalokho kuzoba nzima ukugwema ngokuhlaziya kwe-ingono, futhi ngenxa yalokho, yinhlangano engenzi-yokudla. Prevention hypogalactia ku term amasonto 13-14 is a non massage okuqhubekayo nsuku zonke futhi bezihlikihla izingono eyomile ithawula. Ukunyakaza kufanele kube soft futhi abaqaphe kakhulu, kodwa kancane kancane ukulungiselela amabele ngoba ibele, futhi izinkinga kuyoba ingasaphathwa.
Ngemva kokuzalwa komntwana
Isikhathi sahamba ngokushesha, futhi ingane yakho silungele ukuqala ukudla ubisi lwebele. Isimanga siwukuthi kodwa hypogalactia zokuvimbela aphethwe manje, ngqo imvuthu ezandleni zakhe. Imithetho ezilandelayo kufanele zilandelwe ngokuqinile, njengoba salokhu kusetshenziswa encike ngqo kwi ukukhula nokuthuthuka ingane yakho.
Ngo onakekelayo ebusuku umntwana zihilelekile nobaba nomama kungaba uphumule. Better bayavumelana ngalokhu kusengaphambili. Kubalulekile kakhulu ukuba othile usizo ngemisebenzi yasekhaya, khona-ke owesifazane bazokwazi ukulala amahora ambalwa ntambama. Lactation iyehlisa ukukhathala, ungakhohlwa ngakho lapho imicabango zomsebenzi migilingwane. Ake umshini-umshini izona ilondolo, multivarka ekulungiseleleni ukudla kwakusihlwa, futhi silale nengane eziyigugu.
Prevention hypogalactia kwabesifazane lactating - ngokuyinhloko inhlangano umsoco ofanele. Ukudla akufanele kube kakhulu okunama-kilojoule amaningi, kodwa ngaso sonke isikhathi ezihlukahlukene futhi kunokulinganisela yini. Akunakusetshenziswa abakwazi unamathele ukudla. Khumbula ukuthi, njengoba ngesikhathi sokukhulelwa, umzimba wakho manje komthombo amandla ngoba imvuthu. Ngaphambi ukudla kuqala aphelele njengoba wamukela unina zonke izakhamzimba, amavithamini namaminerali. Kusadingeka isikhathi ukunciphisa umzimba, inqobo nje ukuqeda kusukela ekudleni okuthosiwe, okunamafutha kanye nokudla okunoshukela.
Lactation sixhomeke kakhulu isimo ngokwengqondo. Phakathi nenkathi yokukhulelwa, wena ngiphuphe ukuthi lapho unamathisele imvuthuluka ku obisini lwebele ngeke une ngokuchichimayo. Ngakho-ke, lalela iseluleko lomama waba nayo ngabangane. Yondla imvuthuluka ibele - akuyona nje kuhle empilweni yakhe, kodwa futhi esilungele unina, futhi kuyazuzisa futhi ngoba ibhajethi umndeni.
Omdala owesifazane, kulapho angakhamba unezinkinga lactation. Ngakho-ke, unyaka elilungile izingane kokuba ibizwa ngokuthi inkathi kusukela eminyakeni 22 kuya 35. Ngalesi sikhathi, umzimba female ukulungele ukunikeza inzalo ubisi. Nokho, kuyadamba ezihlobene nokukhula of lactation - it is wakhuzwa isimo, udinga kuphela ukubona udokotela ngesikhathi.
Futhi yini okufanele uyenze uma ubisi akwanele, nowesifazane efana ibele imvuthu? Okokuqala, khumbula ukuthi akulona hypogalactia umusho. Ukwelashwa ilula ngokwanele, kodwa ngesikhathi esifanayo ngempumelelo. Endabeni ka ukukhiqizwa ubisi enganele sabelwe niacin, Vitamin amalungiselelo, ikakhulukazi uvithamini E. usizo Excellent Iziphungo amakhambi, kuhlanganise hawthorn, sembabazane kanye parsley. Ayikho contraindication for ibele omama, awayona. Ukudla kufanele lifake walnuts futhi hazelnuts, cashews kanye imbewu sunflower. Ngaphezu kwalokho, odokotela batusa aphuza itiye ababuthakathaka ubisi.
Uma unomuzwa wokuthi ingane yakho ukudla okwanele, musa ukusheshe ukuthenga ekhemisi ngezindleko zemithi engamakhambi. ithuluzi Yabantu efakazelwe lekutfutfukisa lactation - kuba ukumnika imbewu fennel. A isipuni imbewu kudingeka uthele ingilazi yamanzi abilayo futhi ushiye amahora ama-2. Phuza kufanele usuku lonke, omunye isipuni.
Ngaphezu kwalokho, ungazama ukwenza ukulibopha esifubeni sakhe phakathi feedings. Ngenxa yalesi moisten ithawula emanzini ashisayo. Kufanele kuqashelwe ukuthi zonke izindlela ezibalwe kuphela uma kowesifazane ngokwakhe isethwe ukondla ingane yakho ibele. Kungenjalo, musa ubuhlungu, wena nje ukuthenga ukuxuba ngomumo.
Funda kabanzi mayelana lokudla
Njengoba sishilo, yiyona kanye lokho ukudla umama, futhi sithole indlela yokwakheka ubisi. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuba ucabangele omama amandla yokudla izinyanga. Ithebula ivumela owesifazane ukuze uqonde kangcono ukuthi yini futhi uma kudingeka ukubeka endishini kuya pipsqueak esakhula hhayi kuphela ezinkulu, kodwa futhi enempilo. Kumelwe sikhumbule ukuthi ibele - iwukuhlale maqondana eduze zikamama nomntwana, okwakukhona kubo ngaphambi kokuzalwa, inqobo nje uma besebenza njengomphakathi owodwa umzimba owodwa.
Iphutha ethandwa kakhulu
Ngokuvamile owesifazane esaba kangangokuthi ingane niyolamba, uqala ukudla okuningi futhi ngokuvamile. Lokhu lula izinganekwane emiphakathini. Akusekela abesifazane ukuthi ukukhiqizwa ubisi uthatha eziningi kilojoule ukuthi udinga ukugcwalisa. Eqinisweni, inani elikhulu ukudla (ikakhulukazi elicwengisiswe, amafutha) yingozi kokubili wena kanye nengane yakho. I kilojoule extra kuthiwa imali ezinhlangothini osemusha futhi ubuthi imikhiqizo kwamazinyo, lapho umzimba akanayo isikhathi ukucubungula, faka ubisi.
Ngo ubisi ukukhiqizwa ngelanga kudinga mayelana 500 kcal. Lapho ukuphila umzimba, lapho owesifazane njalo ekhaya, mayelana izinyane, kwanele 2000 kilojoule ngosuku. Ngakho, ekudleni kumele singeqi evamile 2500 kilojoule. Uzobe isesimweni esihle, futhi ingane iyokhula enempilo.
Ngenyanga yokuqala, okunzima kakhulu
Ukwazi lokho kufanele kube nokudla ngendlela efanele ngoba nabancelisayo izinyanga (ithebula eboniswe ngenhla), ungakwazi ukuhlela ekudleni kwakho esikhathini esinzima kakhulu futhi kubalulekile, lapho esiswini namathumbu ingane Ufika esetshenziswa ukusebenza ku-inthanethi kuphela. Qiniseka ukuthi baphuze ezimbili amalitha amanzi okumsulwa, yonke kuzoqhubeka lactation. Ngaphambi kosuku yeshumi kufanele ukulandela ukudla okuqinile. Ngalesi sikhathi ungakwazi udle apula nezitini, ubhanana, okusanhlamvu (irayisi, nokunye okufana nokolweni, ommbila, ukolweni). I kwasemini kuyoba kuhle ukhetho Meatless isobho. Qiniseka ukuthi ufake imenyu abilisiwe, inyama wezokudla, kufika ku-15 amagremu ngosuku ibhotela ungafundeki ezitshalo.
Ngesonto of impilo yengane yesibili (emva kwezinsuku ezingu-10) kufanele kancane kancane ukungezwa ekudleni imikhiqizo yobisi izinhlanzi abilisiwe, amaqanda, isinkwa esinsundu, amazambane abilisiwe ne-pasta. Steamed, wabhaka abilisiwe imifino nemifino.
Banned ngale nkathi ubisi lonke inkomazi. Broths kusuka kunoma iyiphi uhlobo inyama, futhi, ukunikeza amalungu omkhaya. izithelo ezomisiwe bengayi omisiwe. Zonke imifino eluhlaza kanye izithelo, ngaphezu apula wabhaka ubhanana, ziphinde zisuswe kusukela imenyu. Inqobo nje uma ungenayo ukuzitika on namakhekhe fresh baking kafulawa, kanye bazithokozise itiye nekhofi. Yiqiniso, lolu hlu get okusemathinini futhi ayi, ukhukhamba, utshwala.
Kusukela amabili kuya kwayisithupha
Manje, ukukhetha ukudla kungase kube kancane kancane ukunwetshwa. ingane umzimba isivele emsebenzini kanye inhlabamkhosi kahle ukudla. Ngakho-ke, umama abanakukwazi ake izinto ezintsha afakwe ekudleni. Kufanele ugcine umbhalo wokudla kwansuku zonke, ukuze wazi nini futhi sizodlani nokuthi ukusabela ingane aluthatha ngemva kwalokho. Manje ungakwazi ukwengeza e ekudleni ngaphezulu imifino nezithelo kanye nokudla okuphekiwe.
Ungenza siqu yemifino isobho lakho ukuze utamatisi juice, ukwelekelela ngayo inyama yenkonyana noma unogwaja, izigwaca noma inkukhu. Ngaphezu kwalokho, nawe ungadla izithelo ezithile zonyaka namantongomane (ngaphandle amantongomane futhi pistachios). Imvume linikezwa spoonfuls ambalwa ujamu elimnandi.
Kusukela izinyanga eziyisithupha kuya onyakeni
Wezingane wesifunda ngempela ikutshele ukuthi silondoloze ibele kuze kufinyelele ezinyangeni eziyisithupha. Nokho, Kahle kahle, kungcono ukushiya avale unyaka. Phakathi nale nkathi, ingane kakade odla ngokwayo, kodwa kuthatha ubisi kancane. Ngakho unina bangakha ekudleni kwakho ngokuvumelana nezifiso zabo. Okuvunyelwe ukuba badle izithelo exotic kwasolwandle, ubhontshisi nesweli, kanye ushokoledi. Futhi lapho ngemva konyaka wonke umntwana uya ukudla ahlukene, umama uphefumule gidi futhi ubuyele emuva Ukudla evamile. I nzima kakhulu futhi ezibalulekile isikhathi usezofika ekupheleni. Manje ingane luyokhula ngokukhulu ukushesha usuku ngalunye oludlulayo ujabula kuwe impumelelo ezintsha futhi esisha.
Ukuvuvukala wesibeletho: Ubangela, Ihlahlubo, Ukwelashwa
IUD "Juno": incazelo, ukwakheka, yokusetshenziswa futhi impendulo
Kuyini isikhundla offside, futhi iduduzekile
9 izindawo esesabekayo emhlabeni, ubunjalo engasasetshenziselwa abakwazi ukuchaza ososayensi
Finishing umsebenzi. redecorating